Nandehandeha be i Tim tamin’ny fahatanorany ary nampianatra fikatsahana ivelany izy; Taorian’ny zava-niainany maro, tamin’ny fiandohan’ny faha-20 taonany dia nampiofana ho mpikaroka momba ny sampan-draharaha izy ary avy eo dia lasa Mpandrindra fiofanana ho an’ny fiofanana ho an’ny Lehiben’ny Fahasalamana any NW Thames. Nandritra io fotoana io dia nanangana orinasa mpanofana traikefa nahafinaritra an-kalamanjana i Tim, nihazakazaka fampianarana ho an’ny fampandrosoana manokana, indrindra ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana, nahazo fankatoavana avy amin’ny Royal Colleges ary natambatra ho modely amin’ny taranja diplaoma, miaraka amin’ny iray nalaina sary ao anatin’ny andiany ITV ao amin’ny John Hopitaly Radcliffe, Oxford.
Nandany 13 taona i Tim tamin’ny sehatry ny Orthopaedic Medical Devices, nifantoka tamin’ny Trauma, fandidiana hazondamosina ary ny fanoloana mpiara-miasa.
Tim dia nanana fiainana isan-karazany; izy dia mpampianatra an-tsekoly momba ny fitsaboana eny amin’ny oniversite, mpampianatra sivily ao amin’ny UK Medical Forces Patrol Medical Course, izy irery no sivily nahavita io taranja io, tena nilaina io rehefa nihazona ny taranja Primatiora Trauma Foundation tany Afrika. Tim dia nahavita diplaoma taorian’ny nahazo diplaoma tamin’ny Travel Health tao amin’ny Glasgow Medical School ary nanoratra boky antsoina hoe “The Gap Year Handbook: An Essential Guide to Adventure Travel”. (tsindrio eto raha hisintona maimaim-poana ). Izy koa dia nahavita sy niresaka momba ny fampianarana ‘Anesthesia for Countries Countries’ tantanan’ny University of Oxford.
Tim dia mpandahateny mahazatra tao amin’ny radio BBC ary nanao lahateny manerantany tamin’ny kaonferansa sy andrim-panjakana momba ny lohahevitra momba ny fahasalamana isan-karazany, ary izy dia mpitsidika mpitsidika ny fandaharam-pianarana diplaoma sy master manerantany.
Amin’ny fotoanany dia tia mitendry gitara ao amin’ny Church Band i Tim, mandehandeha ary mandehandeha ilay alika ao amin’ny fianakaviana. Izy koa dia mitarika lasy maharitra herinandro mandritra ny herinandro ho an’ny Mid Wessex Christian Camps.
Tim koa dia mpamatoky ny fivarotana boky Kristiana, ny Ivotoerana Kristiana Oasis ao Romsey